Faahfaahin Laga Helay Dooni Tahriibayaal Siday Oo Ku Degday Xeebaha Liibiya – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Faahfaahin Laga Helay Dooni Tahriibayaal Siday Oo Ku Degday Xeebaha Liibiya
Published on May 14 2014 // Warar
Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dadaalka gurmadka ee tobanaan muhaajiriin ah lagaga badbaadiyay doon ku degtay xeebaha dalka Libya. Tahriibayaasha ayaa u badnaa Somali.
Waxay sheegtay in xilligaas ay u tageen doonta degtay wali qayb yar oo ka mid ah ay hirka dushiisa ka muuqatay, balse in yar kadib ay doonta oo dhani badda gashay.
Dadka la soo badbaadiyay waxaa ka mid ahaa haween Soomaali ah oo la yidhaahdo Amina. Waxay ku dhaganayd alwaax yar, iyadoo xoog ugu dadaalaysa in wiilkeeda afar bilood jirka ah madaxiisa ay biyaha ka ilaaliso.
Hooyadii ayaa laga soo saaray biyaha oo aad u qabow badan, iyadoo xaaladeedu liidato, aadna u naxsan, balse si gaabis ah ayay u soo kabatay ugu dambayntiina awood u heshay in ay naas nuujiso ilmaheeda.
Talyaaniga, ayaa si cadho leh uga jawaabay doontan ugu dambaysay ee degtay. Waxaa ciidamada badda iyo kuwa xeebaha ay joogaan oo ilaaliyaan badda ballaadhan, iyagoo isku dayay in ay ka hortagaan dhibaatooyin kuwan oo kale ah.